Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii dagaaladii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe iyo Garoonka Q/dahare oo weerar lagu qaaday
Warbixintii dagaaladii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe iyo Garoonka Q/dahare oo weerar lagu qaaday
Posted by ONA Admin	/ October 13, 2013
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo aad utiro badan oo ciidamada Wayaanaha lagu wiiqay. Dagaaladan oo meela kala duwan oo dalka ah ka dhacay ayaa ayaa ciidamada cadawga laga dilay inta la hubsaday 52askari oo darajooyin kala duwan leh iyo dhaawaca farabadan. Waxaa kaloo lagaga gubay laba gaadhi iyo ciidankii saarnaa oo halkaa ku basbeelay. Dagaaladaa ayaa u dhacay sidan;
30/9/13 Tuli oo Galaalshe katirsan dagaalo 2 jeer kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay inkabadan 11 askari 13 kalana waa laga dhaawacay. isla 30/9/13 Dhalu oo Jigjiga katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari 7 kalana waa laga dhaawacay.
13/10/13 CWXO ayaa weerar kuqaaday garoonka dayuuradaha ee Magaalada Qabridahare hugunka rasaasta ayaana laga maqlayay daafaha magaalada waxaana lagu soo waramayaa in ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare xoogan.